Dagaalyahanka ugu faca weyn ee Daacish ku jira. +Sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Dagaalyahanka ugu faca weyn ee Daacish ku jira. +Sawiro
Kooxda Daacish ayaa soo bandhigtay muuqaal iyo sawiro laga qaaday ruux sheeganaya inuu u dhashay dalka Shiinaha kaasoo loo aqoonsaday inuu ka mid yahay dagaalamayaasha ugu faca weyn ee Daacish ka tirsan.
Ninkaan oo magaciisa lagu sheegay Max’ed Amiin waa 80 sano jir waxaana uu ku sheegay waraysi laga qaaday inuu kasoo tagay wadanka Shiinaha kadib markii uu dhibaato adag la kulmay waxaana uu hadda ku sugan dalka Syria oo uu ka dagaalamo.
Sawirada iyo muuqaalka ay kooxda Daacish baahisay waxaa ka muuqanaya Max’ed Amiin oo wata qoriga AK47 marna dul fadhiya qori weyn oo dul saaran gaari tikniko ah.
Asaga iyo xubno qoyskiisa ka tirsan ayuu sheegay inay kasoo carareen dhulka ay Muslimiinta laga tirada badan yahay ee Shiinaha degaan waxaana uu xusay inuu awood u leeyahay dagaalamo socdana ama uu lugeeyo wax ka badan 4 km.
“Waan kasoo hijrooday dhulka ay gaalada Shiinuhu xooga ku haystaan waxaanse ku haminayaa inaan ka xoreeyo oo ay qilaafadda Islamku gaarto” ayuu yiri.
Inuu maalin walba furimaha dagaalka tago oo uu rasaas rido ayuu sheegay 80 jirkaan Shiinaha u dhashay ee Daacish hadda ku jira.
Max’ed Amiin waxaa uu ka tirsanaa Muslimiinta cadaadiska la saaro ee dega gobolka Shiinjiin waxaana warbaahinta Shiinuhu sheegeen inuu imam masjid ahaa.
Dhulka Muslimiinta Shiinaha waagii hore waxaa loo yaqaanay Turkestan waxaana Muslimiinta hadda dalka Shiinaha ku nool la kulmaan culays adag oo dhanka dawlada kaga yimaada.
“Hadda waxaan ahay shaqsi awood leh oo dagaalami kara kadib markii aan tababar qaatay hubna helay” ayuu yiri ruuxaan ay Daacish soo bandhigeen ee loo aqoonsaday dagaalamaha ugu da’da weyn ee Daacish ku jira.
Sidoo kale muuqaalka Dacish waxaa kasoo muuqday caruur yar yar oo Shiinees kuwaasoo tababar iyo casharo diini ah qaadanaya qaarkoodna waxayba ku hanjabayaan inay Shiinaha ka xoreynayaan gobolada Muslimiintu degaan.